Levitikọs 3 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
3 “‘Ọ bụrụ na àjà ya bụ àjà udo,+ ọ bụrụkwa na ọ ga-eweta ya site n’ìgwè ehi, ma ọ̀ bụ oké ma ọ bụ nne, ọ bụ nke ahụ́ dị mma+ ka ọ ga-eweta n’ihu Jehova. 2 Ọ ga-ebikwasị aka n’isi+ anụ ahụ ọ na-achụ n’àjà, a ga-egbukwa ya n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute; ụmụ Erọn, bụ́ ndị nchụàjà, ga-efesa ọbara ya gburugburu n’elu ebe ịchụàjà. 3 Ọ ga-enye ụfọdụ n’ime àjà udo ahụ ka ọ bụrụ àjà a na-esure n’ọkụ nye Jehova, ya bụ, abụba+ nke kpuchiri eriri afọ ya, ọbụna abụba niile dị n’elu eriri afọ ya,+ 4 tinyere akụrụ ya abụọ+ na abụba dị n’elu ha, ya bụ, abụba dị n’úkwù ya. Ma ọ ga-ewepụta abụba dị n’elu imeju ya, ya na akụrụ ya. 5 Ụmụ Erọn+ ga-esure ya n’ọkụ+ n’elu ebe ịchụàjà, n’elu anụ àjà nsure ọkụ nke dị n’elu nkụ+ e sonyere n’ọkụ, dị ka àjà na-esi ísì ụtọ+ nke a na-esurere Jehova n’ọkụ. 6 “‘Ọ bụrụ na anụ ọ ga-eji chụọrọ Jehova àjà udo ga-esite n’ìgwè ewu na atụrụ, oké ma ọ bụ nne, ọ bụ nke ahụ́ dị mma+ ka ọ ga-eweta. 7 Ọ bụrụ na ọ bụ nwa ebule ka ọ ga-eji chụọ àjà, ọ ga-eweta ya n’ihu Jehova.+ 8 Ọ ga-ebikwasị aka n’isi+ anụ ahụ ọ ga-eji chụọ àjà, a ga-egbukwa+ ya n’ihu ụlọikwuu nzute; ụmụ Erọn ga-efesakwa ọbara ya gburugburu n’elu ebe ịchụàjà. 9 Ọ ga-esi n’anụ àjà udo ahụ were abụba ya nye ka ọ bụrụ àjà a na-esure n’ọkụ nye Jehova.+ Ọ ga-esi n’ebe ọkpụkpụ azụ ya wepụ ọdụ ya dum nke bụ́ abụba abụba,+ wepụkwa abụba nke kpuchiri eriri afọ ya, ọbụna abụba niile dị n’elu eriri afọ ya,+ 10 tinyere akụrụ ya abụọ na abụba dị n’elu ha, ya bụ, abụba dị n’úkwù ya. Ọ ga-ewepụtakwa abụba dị n’elu imeju ya,+ ya na akụrụ ya. 11 Onye nchụàjà ga-esure ya n’ọkụ+ n’elu ebe ịchụàjà dị ka ihe oriri,+ bụ́ àjà a na-esure n’ọkụ nye Jehova. 12 “‘Ọ bụrụ na ọ bụ ewu+ ka ọ ga-eji chụọ àjà, ọ ga-eweta ya n’ihu Jehova. 13 Ọ ga-ebikwasị ya aka n’isi,+ a ga-egbukwa+ ya n’ihu ụlọikwuu nzute; ụmụ Erọn ga-efesa ọbara ya gburugburu elu ebe ịchụàjà. 14 Ọ ga-esi na ya were abụba kpuchiri eriri afọ ya chụọ àjà, ka ọ bụrụ àjà a na-esure n’ọkụ nye Jehova, bụ́ abụba niile dị n’elu eriri afọ ya,+ 15 tinyere akụrụ ya abụọ na abụba dị n’elu ha, ya bụ, abụba dị n’úkwù ya. Ma ọ ga-ewepụta abụba dị n’elu imeju ya, ya na akụrụ ya. 16 Onye nchụàjà ga-esure ha n’ọkụ n’elu ebe ịchụàjà dị ka ihe oriri, bụ́ àjà na-esi ísì ụtọ nke a na-esure n’ọkụ. Ọ bụ Jehova nwe abụba niile.+ 17 “‘Ọ bụ ụkpụrụ dịịrị ọgbọ unu niile ruo mgbe a na-akaghị aka, n’ebe niile unu ga-ebi: unu erila abụba ọ bụla ma ọ bụ ọbara ọ bụla+ ma ọlị.’”